Ha Iloobin U hogaansanaanta, Iswaafajinta, iyo Barnaamij Wanaagsan | Martech Zone
Isniintii, September 4, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Haddii aan ka abuuri lahaa codsi xoqan, waxaa jira waxyaabo gaar ah oo aan hubaal ka dhigi doono in la gaadhay:
Xaashiyaha Cascading - adoo ka soocaya lakabka muuqaalka ah ee arjigaaga heerka dhexe iyo gadaal-dhamaadka, uma baahnid inaad waxbadan ka badasho wax ka badal yar oo faylal ah si aad si firfircoon ugu bedesho istcimaalaha isticmaalaha websaydhada Beerta CSS Zen wuxuu muujinayaa awoodda CSS si fantastik ah. HTML-ku waa isku mid barta oo dhan, laakiin markaad u kala wareejiso mawduucyada, xaashiyo qaab cusub ayaa la adeegsadaa oo goobta ayaa la beddelaa. Waxaan sidoo kale kula talin lahaa kuwooda buugga.
Tijaabinta - Mawduucyada bogga waa 'heerka-dhexe' ee u dhexeeya dhabarkaaga dambe iyo dhammaadka hore. Tani waxay ka saartaa lambarka soo-celinta dhabta ah bogagga oo si fudud ayaa looga tixraacay sheybaarka. Faa'iidooyinka sheybaaradu waxay ka caawinayaan kala sarraynta iyo buunshaha. Waxqabadka dambe-dhamaadka ma jebin doono waxqabadka bogga iyo dhinaca kale.
Koodhka arjiga guud - waa inaadan waligaa ku qorin isla lambarka laba jeer arjiga gudahiisa. Haddii aad sidaas sameysid, waxaad u qoreysaa arjigaaga qalad. Markaad u baahan tahay inaad isbeddel sameyso, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ku beddesho isbeddel keliya oo hal boos ah.
database - ku kaydso xogta keydka macluumaadka. Kaydinta xogta lakab kasta oo kale waxay u baahan tahay shaqo aad u badan!
U hoggaansanaanta XHTML - sida teknoolojiyada sida Nidaamyada Maareynta Mawduucyada, API-yada, RSS, iyo aaladaha kale ee is-dhexgalka maaddooyinka ay noqdaan kuwo aad u baahsan, gudbinta waxyaabaha loo baahan yahay inay fududaato. Heerarka XHTML waa muhiim maxaa yeelay waxyaabaha si fudud ayaa 'loogu qaadi karaa' bogagga kale, adeegyada, ama goobaha kale.
Shaqeynta iskudhaf-biraawsarka - biraawsarayaashu waxay ula dhaqmaan HTML iyo CSS si kala duwan. Waxaa jira hacks badan oo hubiya waxqabadka iskudhafka biraawsarka. Waa inaad had iyo jeer ku taageertaa 3 daalacod ee ugu sareeya warshadaha 3dii ugu dambeysay ee mid waliba soo saarto. Wixii intaas dhaafsiisan, anigu iskama dhibi doono… waxay noqon doontaa geerida biraawsarka haddii aysan la socon karin eeyaha waaweyn.
Waxqabadka iskutallaabta - shaqeynta qaar isku mid maahan ama lagu bixiyo inta u dhexeysa PC, Mac, iyo Linux. Haddii aad sameyso dhammaan tallaabooyinkii hore, maahan inaad dhibaato la kulanto, laakiin weli waan tijaabin lahaa si aan u hubsado!
Isku dayga inaad ku hagaajiso tuubbooyinka guriga la dhisay waa qaali. Sameynta 'tuubooyinka' wanaagsan xagga hore waxay kaa badbaadin doontaa lacag badan mustaqbalka fog!
Waxaan helay ilo aad u fiican oo la yiraahdo Baaraha intaad akhrinaysid baloog kale, oo la yiraahdo Bytes aan kala sooc lahayn. Ugu dambeyntiina, haddii aad raadineyso inaad noqotid codsi shirkadeed oo leh ballaadhin ballaaran iyo baaxad leh, Waxaan ka taxaddarayaa shaqaalaha iska indha tira ama aan ka walwalin waxyaabahaas goor hore. Raadi dad daryeel leh! Waxaad tahay nolosha wax badan ayey kaaga fududaan doontaa wadada.
Tweaks: U guurista qaab ballaaran
Sep 5, 2006 at 4: 53 PM
Kaliya waxaan orday tijaabada silktide.com oo waxaan helay 7.9, xitaa badhan baan saaray boggeyga, mahadsanid!